Qajeelcha addaa Gabatee Too'annoowwanii
Galmeewwan akka barbaaddetti agarsiisuf gabatee too'annoo ibsuu dandeessa. Jecha biraatin dirreewwan deetaa akka deetaa unkaa kuusaa deetaatti agarsiisuuf ykn gulaaluuf fakkaatutti ibsuu dandeessa
Dirreewwan asiin gadii gabatee too'annoo keessatti ni danda'amu: barruu, guyyaa, yeroo fi dirree maallaqaa, dirree lakkoofsaa, dirree sarxaa, sanduuqa filannoo fi sanduuqa makaa. karaa dirree guyyaa/yeroo qindaayetiin, tarjaawwan lama ofumaan uumamu
Lakkoofsi sararoota filatamanii, yoo kamiyyuu filataman, lakkoofsa galmeewwan hunda booda hammattuu keessa jira.
Tarjaawwan gara gabatee too'annotti saaguf, irraantoo tarjarratti cuqaasun baafata halqaraa mul'isi/baasi. Ajajoonni asiin gadii ni jiraatu:
Dirree deetaa filuuf gabatee too'annoo keessatti fudhachuuf baafata xiqqaa waamaa.
Gabatee too'annoo harkisuu fi kaa'utti fayyadamii qindeessi:Madda iyyaafata deetaa bani akkasumas dirree desired ta'an madda iyyafata deetaa fi tarjaa irraantoo gabatee too'annoo irraa harkisi. Tarjaa dur qindaa'e ni uumama
waliin Bakka buusi
Dirree deetaa filuuf dirree deetaa gabatee too'annoo keessatti filataman bakka buusuf baafata xiqqaa banaa.
Tarjaa ammee filatame haqa.
Amaloota qaaqaa tarjaa filamee banaa
Tarjaa filame dhoksa. Amaloonni isaa hin jijjiiramne.
Qaaqa Tarjaawwan mul'isu waami.
Title is: Qajeelcha addaa Gabatee Too'annoowwanii